HỌRỌ DRAỊVỤ IKE. KEDU HDD BỤ IHE A PỤRỤ ỊTỤKWASỊ OBI, IHE IKA? - DISK - 2020
Diski ike (nke a bụ HDD) bụ otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke kọmputa ọ bụla ma ọ bụ laptọọpụ. A na-echekwa faịlụ ndị ọrụ niile na HDD ma ọ bụrụ na ọ daa, mgbe ahụ ịghachite mgbake bụ ihe siri ike ma ọ bụghị mgbe niile. Ya mere, ịhọrọ diski ike abụghị ọrụ dị mfe (M ga-ekwu ọbụna na mmadụ enweghị ike ime n'enweghị ezigbo ọdịda).
N'isiokwu a, m ga-agwa gị na asụsụ "dị mfe" gbasara mpaghara niile nke HDD na ịkwesịrị ịṅa ntị mgbe ị na-azụ. Nakwa na njedebe nke isiokwu a, m ga-ede ọnụ ọgụgụ nke dabeere na ahụmahụ m na ndabere nke ụdị dị iche iche nke ngwa ngwa.
Ya mere ... Bịa n'ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụ mepee ibe na Intaneti dị iche iche dị iche iche: ọtụtụ ụdị nke draịva siri ike, nke dị iche iche, na ọnụahịa dị iche iche (ọbụlagodi na otu nha na GB).
Tụlee ihe atụ.
Seagate SV35 ST1000VX000 Dọrọ Drive
1000 GB, SATA nke Atọ, 7200 rpm, 156 MB, c, cache memory - 64 MB
Disk siri ike, Seagate, 3.5 sentimita asatọ (2,5) na-arụ na laptọọpụ, ha dị ntakịrị karịa. PC na-eji disk dịka sentimita 3) nwere ikike 1000 GB (ma ọ bụ 1 TB).
1) Seagate - onye na-emepụta diski diski (banyere ụdị HDD na nke ndị ọzọ bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi - lee isi ala nke isiokwu ahụ);
2) 1000 GB bụ ụda diski ike disk kwuru site n'aka onye nrụpụta (ụda olu dị ntakịrị - banyere 931 GB);
3) SATA III - interface diski;
4) 7200 rpm - ọsọ ọsọ (na-emetụta ọsọ nke mgbasa ozi na disk diski);
5) 156 MB - gụọ ọsọ site na diski;
6) 64 MB - Nchekwa cache (echekwa). Ichekwuo nke ọma ka mma!
Site na ụzọ, iji ghọtakwuo ihe a na-ekwu, m ga-etinye ntakịrị foto ebe a na ngwaọrụ "HD".
Ike mbanye n'ime.
Njirimara bụ isi nke disk diski. A na-atụle ụda na gigabytes na octets (na mbụ, ọtụtụ ndị amaghị ama okwu ndị a): GB na TB, n'otu n'otu.
Ihe dị mkpa!
Ndị na-eme nchọpụta na-aghọ aghụghọ mgbe ha na-atụle nha diski diski (ha na-agụ na usoro nke iri, na kọmputa na ọnụọgụ abụọ). Ọtụtụ ndị na-amaghị ọrụ na-amaghị nke ngụkọta a.
Dị ka ihe atụ, na disk diski, olu nke onye na-emepụta bụ 1000 GB, n'eziokwu, ezigbo nha ya dịka 931 GB. Ntak-a
1 KB (kilobytes) = 1024 Bytes - nke a bụ na tiori (otú Windows ga-agụ);
1 KB = 1000 octets bụ ndị na-emepụta nrụpụta siri ike kwere.
Ka m wee ghara iji nsogbu ahụ mee ihe, m ga-ekwu na ọdịiche dị n'etiti eziokwu ahụ na ọkwa dịka ihe dịka 5-10% (nnukwu ọkwa disk ahụ, nke ka ukwuu).
Ọchịchị isi mgbe ị na-ahọrọ HDD
Mgbe ị na-ahọrọ draịvụ ike, n'uche nke m, ọchịchị dị mfe ka ị ga-eduzi gị - "ọ dịtụghị ohere na ibu disk ahụ, nke ka mma!" Ana m echeta oge, 10-12 afọ gara aga, mgbe diski ike 120 GB yiri nnukwu. Dika o siri pụta, o nwebeghị ihe ga-eme ka ọ ghara ịhapụ ya n'ime ọnwa ole na ole (ọ bụ ezie na n'oge ahụ enweghi Internet ọbụla na - enweghị njedebe ...).
Site n'usoro iwu nke oge a, a ghaghịdị ịtụle diski nke ihe na-erughị 500 GB - 1000 GB. Dịka ọmụmaatụ, nọmba ọnụ ọgụgụ:
- 10-20 GB - ọ ga-ewe ntinye nke sistemụ arụmọrụ Windows7 / 8;
- 1-5 GB - ngwugwu Microsoft Office arụnyere (ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ngwugwu a, ma ọ dịwo anya a tụlere ya);
- 1 GB - dika otu nchịkọta egwu, dịka "100 songs kachasị nke ọnwa";
- 1 GB - 30 GB - dịka otu egwuregwu kọmputa nke oge a na-ewe, dị ka usoro, maka ọtụtụ ndị ọrụ, ọtụtụ egwuregwu ndị kachasị amasị (na ndị ọrụ maka PC, ọtụtụ ndị);
- 1GB - 20GB - ohere maka otu ihe nkiri ...
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọbụna 1 TB diski (1000 GB) - ya na ihe ndị dị otú ahụ ọ ga-arụ ọrụ ngwa ngwa!
Winchesters dị iche na ọ bụghị nanị na olu na ika, kamakwa na njikọ njikọ. Tụlee ihe kachasị mma n'oge.
Dịgị ike 3.5 IDE 160GB WD Caviar WD160.
IDE - ogwe ngosi a na-achọkarị maka ịjikọta ọtụtụ ngwaọrụ dịka, ma taa enweela oge ochie. Site n'ụzọ, ike m na-arụ ọrụ na interface IDE ka na-arụ ọrụ, ebe ụfọdụ SATA agafewo "na ụwa ọzọ" (ọ bụ ezie na ha kpachara anya banyere ndị ahụ na ndị ahụ).
SATA - Ọhụụ nke oge a maka ijikọ draịva. Na-arụ ọrụ na faịlụ, na njikọ njikọ a, kọmputa ga-adị ngwa ngwa. Taa, SATA III (bandwidth nke 6 Gbit / s), site n'ụzọ, nwere njedebe azụ, ya mere, ngwaọrụ nke na-akwado SATA III nwere ike ijikọta ụgbọ mmiri SATA II (ọ bụ ezie na ọsọ ga-adị ntakịrị).
Ihe ntanye (mgbe ụfọdụ, ha na-ekwu naanị cache) bụ ebe nchekwa echekwara n'ime diski ike nke na-eji echekwa data na kọmputa na-enweta ọtụtụ mgbe. N'ihi nke a, ọsọ nke disk na-abawanye, ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịgụpụta data a mgbe niile site na diski magnet. N'ihi ya, nnukwu ihe nchekwa ahụ (cache) - ngwa ngwa ka diski ike ga-arụ ọrụ.
Ugbu a na draịva siri ike, ihe ntanetị kachasị, nke dị na 16 ruo 64 MB. N'ezie, ọ ka mma ịhọrọ ebe ebe nchekwa ahụ dị.
Nke atọ a (n'echiche m) nke a ga-akwụ ụgwọ anya. Eziokwu bụ na ọsọ nke draịvụ ike (na kọmputa n'ozuzu ya) ga-adabere na ọsọ nke ntụgharị nke mkpịsị ụkwụ.
Ntughari kacha mma kachasị mma 7200 revolutions kwa nkeji (na-ejikarị akara ngosi - 7200 rpm). Nye ụdị ụfọdụ nke ọsọ ọsọ na mkpuchi (kpụ ọkụ n'ọnụ) diski.
A na-enwekwa nsogbu mgbe niile. 5400 revolutions - ha dị iche iche, dị ka a na-achị, na arụ ọrụ dị jụụ (ọ dịghị ụda olu ọzọ, ọ na-eme ka ọ na-akpụgharị isi magnet). Tụkwasị na nke a, ọdighi iwe ọkụ ndị a, ya mere, ọ dịghị mkpa ka ndị ọzọ dị jụụ. M na-arịba ama na nkesa dị otú ahụ na-ewelata ike (ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na onye ọrụ ọhaneze nwere mmasị na ọnọdụ a).
Na nso nso a, a na - egosi diski na ọsọ ọsọ. 10,000 revolutions na nkeji. Ha na-arụpụta nke ọma ma na-etinye ha na sava, na kọmputa na-achọ ihe dị elu na usoro diski. Ọnụahịa nke ụdị diski dị elu, na n'echiche m, itinye nkwekọrịta dị otú ahụ na kọmputa ụlọ ka na-ezughị ezu ...
Taa, ugbua ise nke ugbo siri ike bu ire: Seagate, Western Digital, Hitachi, Toshiba, Samsung. Ọ gaghị ekwe omume ikwu ụdị akara kachasị mma - ọ gaghị ekwe omume, yana ịkọwa ụdị nke a ma ọ bụ ihe nlereanya ahụ ga-arụrụ gị. M ga-anọgide na-adabere na ahụmịhe nke onwe gị (Anaghị m ewere Ntụle ọ bụla dị na akaụntụ).
Otu n'ime ndị ọkachamara a ma ama nke draịva siri ike. Ọ bụrụ na anyị ewere ya n'ozuzu ya, ha abụọ ga-enwe ihe ịga nke ọma na disk, ọ bụghị otú ahụ ka ha ga-esi bịa. Na-emekarị, ọ bụrụ na n'afọ mbụ nke ọrụ diski ahụ amaliteghị ịwụsa, ọ ga-adịru ogologo oge.
Dịka ọmụmaatụ, enwere m Seagate Barracuda 40GB 7200 rpm IDE. Ọ dịla ihe dị ka afọ 12-13, ma, ọ dị mma ka ọ dị ọhụrụ. Ọ naghị agbawa, ọ dịghị mpi, ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Naanị drawback bụ na ọ bụ oge ochie, ugbu a, 40 GB ezu naanị n'ihi na ụlọ ọrụ PC, nke nwere opekempe nke ihe aga-eme (n'eziokwu, dịka PC a nke ọ na-emi odude ugbu a).
Otú ọ dị, site na mmalite nke Seagate Barracuda 11.0, nke a, na nke m, abawanyelarị. Ugboro ugboro, enwere nsogbu na ha, n'onwe m agaghị m akwado ịnweta "barracuda" ugbu a (karịsịa ebe ọtụtụ n'ime ha "na-eme mkpọtụ") ...
Ugbu a, ihe atụ Seagate Constellation na-enweta nkwado - ọ na-efu 2 ugboro karịa ọnụ karịa Barracuda. Nsogbu ha na-esiri ha ike (ma eleghị anya, ọ ka dị n'isi ...). Site n'ụzọ, onye ọrụ ahụ na-enye ezigbo nkwa: ruo ọnwa 60!
Omenala dị na Western
Ọ bụkwa otu n'ime ụdị ndị a ma ama nke HDD hụrụ na ahịa. N'uche m, draịvụ WD bụ nhọrọ kachasị mma iji wụnye na PC taa. Ọnụ ego a na-akwụ ụgwọ dị mma, a na-achọta diski nsogbu, ma ọ bụ karịa Seagate.
E nwere ọtụtụ "nsụgharị" dị iche iche nke disks.
WD Green (akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na diski diski ị ga-ahụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, lee nseta ihuenyo n'okpuru).
Mpempe akwụkwọ ndị a dị iche, nke bụ n'ihi na ha anaghị ewelata ume. Mgba ọsọ nke ọtụtụ ụdị bụ 5400 revolutions kwa nkeji. Oge ọsọ nke mgbanwe data dị ntakịrị ala karịa nke 7200 draịva - ma ha dị jụụ, ha nwere ike itinye ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikpe ọ bụla (ọbụlagodi na ọ dịghị mma). Dịka ọmụmaatụ, ọ na-amasị m ka ha kwụsị ịgbachi nkịtị, ọ na-atọ ụtọ ịrụ ọrụ na PC, bụ ndị a na-adịghị anụ ọrụ ya! N'ihe banyere ịdabere na ya, ọ dị mma karịa Seagate (site na ụzọ, enweghị ihe ịga nke ọma na batrị Caviar Green discs, ọ bụ ezie na anaghị m ezute onwe m n'onwe m).
Wd acha anụnụ anụnụ
Ihe kachasị ọsọ n'etiti WD, ị nwere ike itinye ọtụtụ kọmputa kọmputa. Ha bụ obe n'etiti nsụgharị Green na Black nke disk. Na ụkpụrụ, ha nwere ike ịkwadoro maka ụlọ PC nkịtị.
Ndị na-arụ ọrụ siri ike, ma eleghị anya na ndị a pụrụ ịtụkwasị obi n'etiti WD. N'eziokwu, ha bụ ndị kasị sie ike ma dị ọkụ. Enwere m ike ịkwado maka nrụnye maka ọtụtụ PC. Eziokwu, na-enweghị mgbakwunye dị jụụ ọ ka mma ịghara itinye ...
E nwekwara Red na Purple ụdị, mana iji mee ihe n'eziokwu, anaghị m agafe ha mgbe mgbe. Enweghị m ike ịkọ ihe ọbụla banyere ikwesị ntụkwasị obi ha.
Ọ bụghị otu akwụkwọ a na-ewu ewu. Enwere otu igwe na-arụ ọrụ na ngwa Toshiba DT01 - ọ na-arụ ọrụ nke ọma, ọ nweghị nkatọ pụrụ iche. N'eziokwu, ọsọ nke ọrụ dị ntakịrị karịa nke WD Blue 7200 rpm.
Ọ bụghị dịka ewu ewu dị ka Seagate ma ọ bụ WD. Ma, n'ụzọ doro anya, ahụtụbeghị m mkpọtụ Hitachi dara ada (n'ihi disk onwe ha ...). E nwere kọmputa dị iche iche na ụdị diski yiri nke a: ha na-arụ ọrụ dị jụụ, ọ bụ ezie na ha na-ekpo ọkụ. A na-atụ aro ka ị jiri ya dịkwuo mma. Echere m, otu n'ime ndị a pụrụ ịdabere na ya, yana WD Black ika. N'eziokwu, ha na-eri 1.5-2 ugboro dị oke ọnụ karịa WD Black, ya mere, ndị ikpeazụ bụ mma.
N'ebe dị anya 2004-2006, ụdị Maxtor mara ezigbo mma, ọbụna ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ siri ike. N'okwu nke ịdabere - n'okpuru "nkezi", ọtụtụ n'ime ha "ama" mgbe otu afọ ma ọ bụ abụọ eji. Maxtor zụtara ya site na Seagate, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla ọzọ ịkọ banyere ha.
Nke ahụ niile. Kedu ụdị nke HDD ị na-eji?
Echefula na ihe kasị sie ike na-enye - ndabere. Ihe kacha mma!